Indlela yokugunda izinwele zomfana - Thola zonke izinyathelo zakhe | Amadoda anesitayela
Ukugunda izinwele zomfana kungaba inselele, kodwa hhayi into engenakwenzeka. Abazali abaningi bathatha ikhono lokugunda izinwele zezingane zabo, noma ngokwenza ngesikele noma insingo. Abanye bafuna indlela yokuqala, yingakho singanikeza ukuthi ungazisika kanjani izinwele zomfana ngendlela engokoqobo futhi ewujuqu.
Iphuzu liwukuthi, ukuze wenze umsebenzi ngempumelelo, ukubekezela nekhono lobungcweti kufanele kwenziwe kahle. Ekuqaleni kungabiza ukuthi ungayisika kanjani into eyenziwa okokuqala ngqa, kepha ngokuhamba kwesikhathi le ndlela kungaba lula kakhulu kunokuba ucabanga. Uma uthola ukuthi akuyona into yakho le, ungahlala ubeka umsebenzi wakho ezandleni zochwepheshe.
1 Yini esiyidingayo ukuze sigunde izinwele zomfana?
2 Indlela yokusika izinwele zengane isinyathelo ngesinyathelo
3 Ukugunda izinwele nge-razor
Yini esiyidingayo ukuze sigunde izinwele zomfana?
Ukugunda izinwele zengane udinga isikele esihle esibukhali. Okufanelekile kungaba yilezo ezikhethekile zokusika izinwele, ezifanele ukuma kwesandla, amancane futhi side. Ithawula elincanyana elizosongelwa entanyeni nasemzimbeni wengane, ukuze izinwele eziwayo zingamkhathazi.
Ikama kuzoba ngcono kakhulu kunebhulashi, isifutho samanzi ukuze ziphonswe ezinweleni eziyoma futhi elinye ithawula ukususa amanzi amaningi.
Intambo kagesi izinwele zokugunda nazo zilungele ukugunda izinwele. Kuzohlala kuqeda noma imiphi imininingwane kangcono kakhulu futhi kuzophuca zonke izindawo ofuna ukuzisika.
Bheka isikhathi esingcono kakhulu sosuku Ukuze bagunde izinwele zabo, izingane zivame ukungahlaliseki futhi asikwazi njalo ukuzikholisa ngakho konke. Ungazami ukukwenza lapho ingane ithukuthele, ukukhala noma ukucasuka nje, ekugcineni kungase kushube nakakhulu.
Ithiphu eyodwa ukukwazi ukuchazela ingane lokho uzoba nesikhathi esimnandi, ukuthi imiphumela yokulinda futhi namanje kuzokufanele. Uma engumntwana ongaphumuli kakhulu, ungamnikeza into engingazijabulisa ngayo, kusuka kuthoyizi elincane, amahlaya noma ubuchwepheshe bethu obucashile. Kepha lezi zinhlobo zokuzijabulisa zibanika njengesixazululo sokugcina, lapho ingane isivele iqala ukukhathazeka ngokulinda.
Indlela yokusika izinwele zengane isinyathelo ngesinyathelo
Sikhetha indawo enethezekile lapho ikhanda lengane liphakeme ngokwanele lapho singagunda kahle izinwele zalo. Kuyinto ekahle ukuthi unayo ikhanda ligeziwe futhi ngenxa yalokho kwaba manzi. Sizosusa umswakama owedlulele ngethawula futhi sizobhinca elinye ithawula emzimbeni wengane, sigcizelele ukulibeka entanyeni ukuze izinwele zingangeni phakathi kwentamo.
Sihlanganisa izinwele kahle ukuze zingahlangani. Sizoqala ngengxenye engenhla yezinwele, sithatha ukukhiya ngokukhiya nokusika iziphetho. Sibeka zonke izinwele zikame emuva futhi simaka umugqa phakathi. Sihlanganisa ohlangothini lwekhanda ingxenye esizoqala ukuyisika.
Woza ukucosha imicu yezinwele phakathi kweminwe ngesandla bese usika izinwele. Sizohlala sihlonipha ukuphakama okufanayo kwezinwele phakathi kweminwe, ukuze konke kuphele ngokulingana, kepha sisika kancane kancane.
Sizosika kusuka ezinhlangothini zekhanda kuya enkabeni futhi sizohamba senza ukunyakaza okufanayo, sithatha izinwele phakathi kweminwe futhi sinqume izinwele ezingaphezulu. Kuqediwe ukuqeda izinhlangothi nengxenye engezansi phakathi komqhele nenape. Lezi zindawo zizoba nezinga eliphansi kakhulu kunezinye izinwele futhi kulokhu singakwazi ukuzisiza ukusetshenziswa kwensingo.
Kusele kuphela ukuqeda ingxenye yama-bangs, ama-sideburns nendawo ye-nape. Singakwenza ngesikele esenza ukusika okuqondile, kepha kutholakale kancane. Le ngxenye ingenziwa nangensingo. Uthatha izingcezu zezinwele ngekama, uzikame ubheke ezansi bese ulungisa ngokulinganayo izinwele ezisele. Ngoba indawo yomphetho ingenziwa okufanayo, kodwa bese uyiqeda ngesikelo senza amanxeba amancane futhi ngobude obuhlukene.
Ukugunda izinwele nge-razor
Silandela izinyathelo ezifanayo njengasekuqaleni, sigcina izinwele zimanzi. Sizoqala ngokubeka inhloko yekhanda 3 womshini futhi sizogunda izinwele kusuka phansi kuya phezulu, ikhanda lonke. Sizoshiya ingxenye engaphezulu isikhathi eside bese sizoqeda kamuva.
Sibeka inhloko yekhanda 4 ukujoyina indawo yezinhlangothi ngengxenye engenhla, njalo ngokunyakaza okufanayo, ukusuka phansi kuya phezulu. Indawo inhloko yekhanda 2 futhi uhambe phezu kwawo wonke ama-contours, kanye nama-sideburns kanye nendawo ye-nape.
Phezulu kwekhanda kungcono ukuyisika ngesikelo, sizothatha imicu yezinwele njengasezinyathelweni ezedlule. Sizoyiqedela kangcono le ndawo enomphetho ngokwenza ukusikeka okuncane kwe-oblique noma okuphambene, ukuze unganikezi umbono we-rectum ephelele.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Ungazisika kanjani izinwele zomfana